I-China Trampoline Park Production and Factory | Izinsimbi Zokudlala zeHaiberi
Amapaki ethu we-trampoline aklanyelwe, akhiqizwa futhi afakwa ngokuhambisana ne-ASTM F2970-13 standard. Kukhona zonke izinhlobo zamaqhinga we-trampoline, avivinya amakhono akho okugxuma kwizithiyo ezihlukile, gxuma esibhakabhakeni bese ushaya i-basketball kubhasikidi, futhi uze uzithumele echibini elikhulu lesiponji! Uma uthanda imidlalo yeqembu, thatha isiponji sakho bese ujoyina impi ye-trampoline dodgeball!
Idizayinelwe uphawu lwakho lokubeka uphawu, isakhiwo nendawo enendawo engqondweni Ithimba laseMelika Elihle likhiqiza iNkantolo eNkulu enothisa ipaki yakho ye-trampoline. Lokhu kukhangana kuthinteka ngokuphelele ngemibala ehlukahlukene yombhede we-trampoline ongayikhetha kusuka nokuqoqwa kokukhethwa kombala okusebenzayo okutholakalayo kumaphampu wakho we-trampoline nemivimbo yombhede.
Inikeza nemidlalo ehlukahlukene epaki ye-trampoline ukuthuthukisa ukudlala kanye nenselele yepaki. Lokhu kufaka phakathi izinkantolo ze-basketball ezaziwa kakhulu, amabhola e-dodge, kanye namachibi wesipanji noma omatilasi bomoya.
Izinto ezisezingeni eliphakeme ze-1.H nezindlela zokukhiqiza eziqine ziqinisekisa ukuphepha kwezinhlelo, amandla nokuphila okude.
Siphinde sixhume ingaphezulu le-trampoline lesikhwama esithambile kakhulu, ngisho nalapho i-trampoline inyathela onqenqemeni, kunganciphisa ukuvela kwezingozi.
Indawo yokufaka ye-3.Trampoline imvamisa iyinkimbinkimbi kakhulu, sizonyathela phansi isakhiwo nezinsika zokwelashwa okune-soft soft package, noma ngabe ithathwe ngengozi, futhi ingaqinisekisa ukuphepha.
Esedlule: I-Trampoline Esebenzisana
Olandelayo: Inkambo yeNinja